कोरोनाबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओली पत्ता लगाए नयाँ औषधि « Ok Janata Newsportal
कोरोनाबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओली पत्ता लगाए नयाँ औषधि
प्रधानमन्त्री कोभिडबाट बच्न टिप्स पनि दिए । तातोपानीको बाफ लिने, नुनपानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
ओलीले थपे, ‘तपाईहरुसँग त बिजनेसका कुरा गर्नुपरेन ? व्यापारका कुरा गर्नुपरेन ? उद्योग–व्यवसायका कुरा गर्नुपरेन ? त्यही कुरा गर्नुपर्छ । अब कोभिड १९ छ, कोभिड १९ को बारेमा कुरै नगर्ने कसरी हुन्छ ? कोभिड–१९ ले देश आक्रान्त छ । भ्याक्सिन आइपुगेन भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ ।
मान्छे बिमारी भयो प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ । निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ, निःशुल्क उपचार गरिएको छ, निःशुल्क खोप लगातार चलाइएको छ तर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइराखेको छ । कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेटनु परेन ? प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ ।’